Allgedo.com » Dhageyso barnaamij gaar ah oo looga hadlaayo xaaladda magaalada Kismaayo iyo amuuro kale.
Home » News » Dhageyso barnaamij gaar ah oo looga hadlaayo xaaladda magaalada Kismaayo iyo amuuro kale. Print here| By: allgedo.com:
1 Jawaab Kaddib markii todobaadkii tagay ay ciidamo huwan ah oo isugu jira Soomaali iyo Keenyaan ay Al-shabaab kala wareegeen gacan ku haynta magaalada Kismaayo, ayaa waxaa sii xoogeystay wal-walka ay Soomaali badan ka qabaan natiijada ka dhalan karta ciidamada aan isku ujeedada aheyn ee qabsaday deegaano dhowr ah oo ka tirsan Jubbada Hoose.
Haddaba, si aad arrimahaas wax uga ogaato, hoos ka dhageyso barnaamij gaar ah oo uu noo soo diyaariyay wariye Cabdullahi Axmed Nuur.
Halkaan ka dhageyso barnaamijka gaarka ah ee xaaladda Kismaayo
Dhageyso barnaamij gaar ah oo looga hadlaayo xaaladda magaalada Kismaayo iyo amuuro kale. " Aniga says:	October 5, 2012 at 3:19 pm	ilma adeerayaalow dadkiinan dhinac ka soo raaca sheekadaan baraa yiri calidheere ayaa yiri fulaan ayaa yiri shaqayn mayso ee tolkiinan dhinac ka soo raaca.